ओली हटे मुलुकले निकास पाउँछ |ओली हटे मुलुकले निकास पाउँछ – हिपमत
काठमाडौं। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले केपी शर्मा ओलीको विदाइसँगै मुलुकले निकास पाउने बताएका छन्।
यसरी हुँदैछ होटलमा माधव-झलनाथ समूहको कार्यकर्ता भेला
ओली सरकारको बजेटले पार्टीका नीति, कार्यक्रम प्रतिबिम्बित हुन सकेनन् : खनाल
प्रधानमन्त्री ओलीलाई अष्टलक्ष्मी शाक्यको सुझाव – फागुन २८ को निर्णय फिर्ता गरेर भेलामा आउनुहोस्
स्याइबर स्याल ज्यूँदैछन्, गलत सूचना सम्प्रेषण गरिरहनेछन्, होसियार! : माधव नेपाल
नेपालले आफूहरुले आयोजना गरेको कार्यकर्ता राष्ट्रिय भेला स्थगित भयो भनेर ‘फेक सूचना’ सम्प्रेषण गरेको भन्दै आपत्ति जनाए ।
‘फेक सूचना जारी गरियो । योगेश भट्टराईको नक्कली हस्ताक्षरको कागज टाँसेर फेक सूचना सम्प्रेषण गरिरहेका थिए,’ उनले भने, ‘४ र ५ गतेको भेला स्थगित गरिएको छ। म आफैँ पनि हेरेँ, के पो आएछ ? उहाँको नाम र सही गरेको फोटोकपी गरेर टाँसेर गलत सूचना सम्प्रेषण गरिएको रहेछ।’
उनले साइबर स्यालहरु अझै पनि ज्यूँदै रहेको भन्दै होसियार हुन आफ्ना पार्टी कार्तकर्तामाझ आग्रह गरे। ‘साइबर स्याल अझै पनि बाँचिहरेका छन्। हिजो मात्र नेकपा हुँदाखेरी थियो होला भनेको ठानेको त नेकपा एमालेले ठूलो जीवन पाइसकेपछि सबै हराएर गए होला भनेको त्यसो रहेनछ’, उनले भने,’ साइबर स्यालदेखि होसियार। भोलि यस्तै गलत-गलत सूचनाहरु सम्प्रेषण गरिनेछन् अनि तपाईहरुलाई अलमलमा पार्नेछन्। ‘
बुधबार, चैत्र ०४, २०७७मा प्रकाशित गरिएको